एकतप्पामा पक्की कूलो बन्दै ,एक हजार पाँच सय रोपनी जग्गा सिंचित::local sandesh
एकतप्पामा पक्की कूलो बन्दै ,एक हजार पाँच सय रोपनी जग्गा सिंचित
गोविन्द लामिछाने / शुक्र, पुस २०, २०७५
फाकफोकथुम । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रको फाकफोकथुम गाउँपालिकाको एकतप्पामा सबैभन्दा ठूलो सिंचाई कूलो निर्माण भईरहेको छ । यस कूलोले फाकफोकथुम गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ मा करिब एक हजार पाँच सय रोपनी जग्गा सिंचित हुने भएपछि यस क्षेत्रका कृषक उत्साहित भएका छन् ।
जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय इलामको रू. तीन करोड ४४ लाखको लागतमा पक्की कूलो निर्माण भईरहेको छ । दुई वर्षदेखि कूलो निर्माण भईरहेको उपभोक्ता समितिका सचिव रामजी कोइरालाले बताउनुभयो ।
विगतमै यो कूलो निर्माण हुनुपर्ने ढिलै भएपनि पक्की कूलो बन्न थालेपछि किसानलाई धेरै राहत पुग्ने अपेक्षा छ, समाजसेवी पुष्प श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘यो कूलोले हाङमासुली र एकतप्पाका धेरै कृषकलाई राहत पुग्छ ।’
देउमाई नगरपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिका बीचमा पर्ने ह्वेङ्मा खोलाको पानी सोझै पक्की कूलोमार्फत किसानको खेतसम्म ल्याउन लागिएको हो ।
१२.१ किलोमिटर लामो सिंचाई कूलोको तीन हजार छ सय मिटर पक्की बनाउनुपर्नेछ । त्यसमध्ये करिब दुई हजार तीन सय मिटर निर्माण भईसकेको छ । बाँकी एक हजार सात सय मिटर पनि दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी चार किलोमिटरमा पानी चलाउने सचिव कोइराला बताउनुहुन्छ । त्यसबाहेक साढे नौ किलोमिटर कच्ची कूलो निर्माण गरेर यसै आर्थिक वर्षदेखि खेतबारीमा पानी पु¥याउने लक्ष्य रहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर योङहाङ बताउनुहुन्छ ।
कूलोको जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयका ईञ्जिनियर दिनेशकुमार घिमिरेसहितको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा काम सन्तोषजनक रूपमै अघि बढिरहेको ई.घिमिरेले बताउनुभयो । त्यस्तैगरी अनुगमन समितिका अध्यक्ष पुष्प श्रेष्ठ, केदार खनाललगायतले पनि कूलोको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ ।
कूलोले साविक एकतप्पा गाविसका १, २, ६, ७, ८ र ९ नम्वर वडाका एक हजार पाँच सय घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।
खेती गर्नका लागि आकाशेपानीको भर पर्नुपर्ने यहाँका किसानले कूलो निर्माण भएपछि राहतको महसुस गर्ने भएका छन् ।